Zụta PolypodiuM wepụ ntụ (9001-00-7) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Osisi wepụ / PolypodiuM Wepụ ntụ ntụ
Rating: SKU: 9001-00-7. Category: Osisi wepụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke PolypodiuM wepụ ntụ (9001-00-7), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
The PolypodiuM wepụ nwere mmetụta dị ịrịba ama na-emetụta ụba nke mkpụrụ ndụ carcinoma hepatocellular na vitamin. Mmiri nke mmiri na-ekpochapu mmiri na-egbochi ọkpụkpụ nke òké na-akpata site na xylene na ọzịza nke ụkwụ ụkwụ na-akpata site na carrageenan, nke nwere ike imebi kemịkal ma ọ bụ ihe mgbu nke ụmụ oke. Mmetụta nke ịdaba shuga na cholesterol na ụmụ anụmanụ.
PolypodiuM Wepụ ntụ ntụ vidiyo
PolypodiuM wepụ ntụ isi Characters
aha: PolypodiuM wepụ ntụ
Usoro Molecular: C9H14N4O3
Molekụla arọ: 226.23
PolypodiuM Wepụ ihe ntụ ntụ
PolypodiuM wepụ (CAS 9001-00-7) makwaara dị ka aha aha SOLARICARE.
PolypodiuM wepụ ntụ ntụ ntụ
Imirikiti nnyocha ndị e mere na Polypodium leucotomos akwukwo ahihia ejiri ihe dị ka 240mg gaa 480mg kwa ụbọchị, ọ bụ ezie na a na-eme nchọpụta dị iche iche na nchọta a hụrụ na 80mg ma ọ bụ 120mg, na nyocha ndị ọzọ na 720mg kwa ụbọchị ma ọ bụ karịa. Ụkpụrụ nduzi a na-ahụkarị yiri ka ọ bụ nzaghachi kwa ụbọchị nke ihe dịka 7.5mg kwa kilogram nke ahụ mmadụ. Maka onye 150 paụnd, nke a ga-abụ ihe dịka 511mg kwa ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị na PolypodiuM Wepụ ntụ ntụ
A na - ejikarị ihe ntụgharị PLE mee ihe maka afọ 20 na Europe, na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, na-enweghị mmetụta ọ bụla metụtara. E nweghị mmetụta ọ bụla a maara nke ọma na PLE ji ọnụ kwuo dị ka ihe mgbakwunye nri.
Polypodium leucotomos akwukwo akwukwo egosiputa uru mgbe anare ya site na nchikota nke anu, na obula rue mgbe edere ya n'elu. N'ihi na ọ na-emekarị ka ọ bụrụ na ọ na-enye ya ndụmọdụ, ọ na-atụ aro ka ọ jiri 30 kwupụta na 60 nkeji oge tupu ya anwụọ, otu ugboro ma ọ bụ ugboro ugboro kwa ụbọchị.
Esi zụta PolypodiuM wepụ ntụ (CAS 9001-00-7) site na AASraw